Manodidina ny Filankevitra faha-8 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Marolahy Dominique il y a 3 années
Fehin-kevitra dimy (05) no nivohitra : Voalohany ny fandrafetana ny sata mifehy ny diosezy. Faharoa ny hanatsarana ilay sori-dalana pastoraly ato amin’ny diosezy mba hanamorana ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ny fanatsarana ihany koa ny lafiny sosialy iandraiketan’ny fiangonana toy ny sekoly, ny toeram-pitsaboana ary ny dispansera. Ny fanohizana ny fanatsarana sy fanajana ny tontolo iainana ka napetraka ho tanjona ny diosezy Maitso, amin’ny alalan’ny fanentanana ny maha zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny fambolen-kazo. Farany sady lehibe indrindra ny nizarana ny diosezy ho faritra dimy nantsoina amin’ny hoe “vikaria”: 1-Vikaria avaratra (Antsalova, Bekopaka, Belo/Tsiribihina, Berevo); 2-Vikaria Avaratra-Atsinanana (Miandrivazo, Dabolava, Ambatolahy, Malaimbandy); 3-Vikaria Atsinanana (Ankilizato, Mahabo, Mandabe, Ankilivalo, Analaiva); 4-Vikaria Afovoany-Atsimo (Tanambao/Marofototra, Bemanonga, Avaradrano, Befasy, Belo/Mer); 5-Vikaria Paroasialy (Antsakoameloka, Tsimahavaobe,Tanambao, Betania, Morondava Centre, Namahora). Tanjona tamin’izao fizarana izao ny fanamorana ny lafiny fitantanana noho izy midadasika loatra.
Ity atrikasa lehibe ity dia tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ireo laharam-pamehana 13 voafaritry ny Sinodan’ny Diosezy 2012-2015. Ka noraisina voalohany tamin’izany ho an’ity taona 2016 ity ny lohahevitra hoe : ”ny fiangonana eto an-toerana” (na ny Eglise locale). Lohahevitra mifototra amin’ny fandinihana lalina ny fiainan’ny Diosezy manokana, ho antoky ny fampiroboroboana ny sosialy sy ny finoana. Tsongaina amin’izany ny fanatsarana ny fifandraisan’ny samy kristianina miaina ao anatin’ny fahasamihafana eny anivon’ny Fiangonana tsirairay. Hatramin’ny volana Mey 2010, fotoana nandraisan’ny Evekan’i Morondava, Ralamboniaina Marie Fabien, ny fitantanana ny diosezy, dia natao ho vaindohan-draharaha teo amin’ny asa pasitoraly ny lafiny fanabeazana. Nisongadina tamin’izany ny fananganana sekoly maro manerana ny Diosezy, eny hatramin’ireo toerana saro-dalana aza. Mbola nohamafisina izany tamin’ny alalan’ny hoe: ”i Kristy avao ro hazomanga soa”. Lohahevitra, mifototra amin’ny kolotsaim-paritra aty amin’ny ilany andrefan’ny Madagasikara. Hazomanga, noheverina fa fototra ivelaran’ny maha olona eo anivon’ny foko na tarika. Ka noraisin’ny Fiangonana ho fampianarana hanamafisana orina ny finoana, ary manome ny maha zava-dehibe ny hasin’i Kristy amin’ny atao rehetra. Mametraka azy ho filoha hitarika, ho fanilo sy fanazavana, ary fanasina.
Aorian’ny fandravonana ireto fehin-kevitra ireto dia fantatra fa hampiantso filan-kevitra indray ny Eveka hankatoavana farany ny hevitra tapaka rehetra, mialoha ny hampiharana azy. Ny “Litorjia sy ny katesizy” indray no lohahevitra hodinihin’ny Diosezy amin’ny taona 2017. Nofaranana tamin’ny fankalazana ny faha 170 taona nisehoan’i Masina Maria tany Lasalety, izay sady mpiaro ny diosezin’i Morondava, ny fivahinianana masina teto.
Vahiny tsy nampoizin’ny kristianina, tonga nanatrika ity lanonana ity ny Lehiben’ny Goverinemanta, Rasolonandrasana Olivier, sy ireo mpiara-miasa aminy vitsivitsy.
(Lahatsoratra nalaina tao amin'ny gazety Lakroan'i Madagasikara, 3990, alahady 18 sepitambra 2016, pejy faha 14.)
Pratique : Pourquoi mai est-il le « mois de Marie » ? - il y a 17 jours